ByTheSea Luxury Apartment
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMariana
Le ndawo yokuhlala kukuhamba ngomzuzu o-1 ukusuka elunxwemeni. Ifulethi i'ByTheSea' ibekwe eMamaia Nord, kumgama wama-400 m kude neziko. Le ndawo intle kwaye iyasebenza, ineendawo ezininzi: iterrace enombono wolwandle, i-wifi, ikhitshi elincinci elixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo (+ ifriji), i-air conditioning kunye nesofa iyandiswa.
Ikhompleksi inamadama okuqubha ama-2 (enye yeyabantu abadala (enebhari) kunye neyeyabantwana abaselula) kunye nendawo enkulu yokupaka.
Ukutshaya ngaphakathi kwiflethi akuvumelekanga kwaye ngokunjalo nezilwanyana zasekhaya.
Le ndlu ixhotyiswe kakuhle ngayo yonke into onokuthi uyifune kuyilo oluphucukileyo kunye nolwahlukileyo. Kwakhona umbono uyaphefumla, uninzi lweendwendwe zethu ziyamangala olu phawu lwam.
Indlu ibekwe kwisitrato se-promenade ecaleni kolwandle. Ihlobo yindawo edlamkileyo yabantu abahle, abancumileyo kwaye abonwabileyo. Kumgangatho ophantsi wesakhiwo kukho indawo yokutyela yamaGrike kwaye nakwindawo kukho iindawo ezininzi, iindawo zokutyela kunye nemivalo yolwandle.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mamaia-Sat